.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီက အဖြေတောင်းပေးမယ့် ဆော့ဝဲလ်
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီက အဖြေတောင်းပေးမယ့် ဆော့ဝဲလ်
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီကို အဖြေတောင်းတဲ့နေရာမှာ အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကူးလေးလည်း
ဆန်းတယ်ပြောရမယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကိုယ်ချစ်နေတဲ့ ကောင်လေး ၊ ကောင်မလေးတွေဆီက ချစ်တဲ့အဖြေကို
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးပေးပြီးတော့ တောင်းကြည့်ပါလား။ သေချာပေါက် ချစ်တယ်ပြောမှာပါ။ မချစ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့..
ချစ်တယ်လို့ ဖြေမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ ဟဲဟဲ
Download: ANSWER ME
Posted by Thurainlin at 07:09
Labels: Love, Software